အကြောင်း | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
နည်းပြအလေ့အကျင့်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်းအတာက M အဘို့အကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံတစ်ခုဖြစ်သည်Aster နည်းပြ။
အဆိုပါပိတ်ပင်စေသည်အရာကိုအပိုင်း® သည်အခြားနည်းပြအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဆိုပါကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနည်းပြအလုပ်ကိုအကဲဖြတ်ရန်လမ်းနှင့်နည်းပြသင်တန်းပေးခြင်းတက်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်တိကျတဲ့အစီအစဉ်မှဘွဲ့ရတစ်ဦးနည်းပြ, တကယ်တော့, နည်းပြလုပ်နိုင်ကြောင်းလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
IAC အသင္း၏® တစ်နည်းပြဖြစ်လာမယ့်ေူပာင်းလဲနိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင်းအမှန်တရားထောက်ခံထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်မှု၏သရုပ်ပြမှတဆင့်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေး, ပညာရေးနှင့်ဘဝအတွေ့အကြုံ, ကိုအတိုင်းအရှည်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့သာမှန်သည်။
သူတို့အနေနဲ့ပိတ်ပင်လက်မှတ်ရ Mastery နည်းပြကိုငှားရမ်းသည့်အခါကုမ္ပဏီများနှင့် client များသိကြဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်® သို့မဟုတ်မာစတာ Mastery နည်းပြ®အဆိုပါနည်းပြအသေးစိတ်စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးတစ်ဦးကြယ်အဆင့်မှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ဒါကသူတို့အမြင့်ဆုံး caliber ၏နည်းပြများငှားရမ်းကြသည်ယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည် client ကိုပြောထားသည်အာမခံချက်၏ခိုင်လုံသောအတိုင်းအတာနှင့်အတူသူတို့လက်ခံရရှိလိမ့်မည် အရည်အသွေးမြင့်နည်းပြ.
ဆိုငယျဆုံးသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းနှံ့နှံ့စပ်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် "ထောက်ခံချက်" assign လုပ်ဖို့ကော်ပိုရိတ်စီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖောက်သည်လိုအပ်သောအာမခံချက်မပေးပါဘူး ... ကနည်းပြစက်မှုလုပ်ငန်းအစေခံမထားဘူး။
IAC အသင္း၏® client ကိုသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်နေရာတိုင်းမှာ - ထိထိရောကျရောသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဆီသို့ clients များပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန်အတွက်နည်းပြကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ၏ဖြစ်ပွားနေသောလိုက်စားထံအပ်နှံနည်းပြတစ်ဦးလွတ်လပ်သော, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သောမတ်စ် Leonard ၏အမွေအနှစ်
အဆိုပါပိတ်ပင်ကိုဆီသို့အဆိုပါအလုပျ® မကြာခဏခေတ်သစ်နည်းပြဝန်ခံတည်ထောင်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသူသောမတ်စ်ဂျေ Leonard ကဦးဆောင်, 2002 ၏ဇွန်လအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ သောမတ်စ်ကြှမျးကနည်းပြတစ်ချန်ပီယံနှင့်မော်ဒယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပိတ်ပင်® တရားဝင်မတ်လ 11, 2003, သောမတ်စ်ရဲ့သေသောနောက်အတိအကျတစ်လအပေါ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူကအဖွဲ့အစည်းကတရားဝင်မွေးခြင်းကိုကြည့်ဖို့ကဒီမှာမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုသူနည်းပြများနှင့် client များအတွက်မိမိအမစ်ရှင်နှင့်ဆန္ဒကိုအဆိုပါပိတ်ပင်နေဖြင့်ပေါ်သယ်ဆောင်လျက်ရှိသောလမ်းကိုဂုဏ်ယူပါလိမ့်မယ်ကိုသိ®.
"ဘာအရာကြွင်းလေနေတဲ့ကြီးမြတ်နည်းပြခွဲခြား; ငါသည်ကြီးမြတ်သောနည်းပြဘယ်လိုရှာရမလဲ, နှင့်မည်သို့ငါကြီးမြတ်နည်းပြဖြစ်ကြောင်းကိုသိလား? "
သောမတ်စ်ရဲ့ရှာပုံတော်ကိုရှာဖွေ - နှင့်သင်ပေး - ဤအဖြေကို2ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပြလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်ယင်းထူထောင်မှဦးဆောင် နည်းပြအောင်လက်မှတ်များအတွက်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း။ သူသေဆုံးသည့်ပိတ်ပင်ကိုခံခဲ့ရသည်ရှေ့တော်၌မိမိနောက်ဆုံးအစပျိုးတစ်ခုမှာ® နှင့်အခြားအသက်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံများအပါအဝင် mastery ဖို့အများကြီးလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်ဝန်ခံတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို - ဝေးနည်းပြတစ်ဦးဉာဏနားလည်မှုကျော်လွန်ပြီး - ဝေးရိုးရှင်းသောပညာသင်နှစ်သို့မဟုတ်အသက်မွေးမှုအရည်အချင်းများကျော်လွန်သွားမယ့်လက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုရှိသည်ဖို့အလို့ငှာ။ အဆိုပါပိတ်ပင်® မသက်ဆိုင်အလုပ်အကိုင်, ပထဝီ, ဒါမှမဟုတ်ယခင်ကျောင်းပညာရေး၏တစ်နည်းပြတစ်ဦးကိုကြှမျးနည်းပြစေတစ်လောကလုံးလမ်းညွှန်ချက်များ, အခြေခံမူ, ကျွမ်းကျင်မှု, စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အပြုအမူကူးပြောင်းနေရာ။
အဆိုပါပိတ်ပင် 2005 အတွက်, ဒီမော်ဒယ်® ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြင်များပါဝင်သည်ဖို့နည်းပြစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ပေါ်နေသော၏တာဝန်ပါသည်။ တစ်ဦး 24 တစ်လကာလ, နည်းပြကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ၏သစ်ကိုတိုင်းတာသည်ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ဖွံ့ဖြိုးသောအဖွဲ့သည်ကျော်®, နည်းပြ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံမူ, ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုအသိအမြင်အဖြစ်နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်ပေါ်နေသောနားလည်မှုခံပြီးကြောင်းနည်းပြကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုမော်ဒယ်ပေးစေ့စေ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လူတွေနည်းပြမှရေးဆွဲနေသောအကြောင်းရင်းများတစ်ခုမှာ "ခါတိုင်းလိုအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း" ကနေထွက်ခွာသွားဗဟိုပြု
နည်းပြအလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစဉ်ဆက်မပြတ်အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းမှသူတို့ကိုယ်သူတို့, သင်ယူခြင်းကြီးထွားလာ, ပူးပေါင်းနှင့်ကိုင်ပြီးမှကျူးလွန်
မ်ားစြားေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာစြမ္းအားၾကီးမားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီးကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေရး တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။
မတူကြဲျပားျခင္း ႏွင့္ အတူတကြပါဝင္ျခင္း
မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း ႏွင့္ ႀကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ခံႏိုင္ရည္အား ႏွင့္ တာဝန္ခံမွု
သမာဓိ ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္မား မွု
IAC အသင္း၏® အလွန်တာဝန်ခံသင်ယူမှု, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အယောင်ဆောင်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိနည်းပြများအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူဘောင်များကိုတစ်ဦး Mission အပေါ်ဖြစ်တယ်, ဒါနည်းပြသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတန်ဖိုးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူ့အလားအလာများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်။
အဖွဲ့ဝင်များIAC®အတွက်အနှစ်သာရနှင့်အသက်အင်အားသုံးဖြစ်ကြသည်။ အဖွဲ့ဝင်များမှတဆင့်, အIAC®ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတစ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဘုတ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။
IAC အသင္း၏® သစ်မက္ကစီကိုအကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းအက်ဥပဒေအောက်မှာထည့်သွင်းတဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပိတ်ပင်® စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလိဂ်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်တွင်းအခွန်များကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ 501 (ဂ) (6) အရအခွန်-ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ (သင့်လှူဒါန်းမှုနှင့်အဖွဲ့ဝင်ကြေးနှုတ်ယူပြီးသားရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စကားပြောဆိုပါ။ )
non-ခွဲခြားဆက်ဆံမှု: အဆိုပါIAC®လူမျိုး, အသားအရောင်, မူရင်းနိုင်ငံသား, ကျား, မ, ဘာသာရေး, အသက်, မသန်စွမ်း, နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်, လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးသို့မဟုတ်မိသားစုအဆင့်အတန်း၏အခြေခံပေါ်မှာရှိသမျှသည်၎င်း၏အစီအစဉ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတားမြစ်ထားပါသည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု, အIAC®နေဖြင့်သတ်မှတ်အဖြစ်, အမျိုးသားရေး, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်လူများ၏အုပ်စုတစုသည်အခြားလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ထက်လျော့နည်းလိုလိုလားလားကုသသို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမျိုး, အရောင်များ၏IAC®၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်လွတ်လပ်စွာနှင့်အပြည့်အဝပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုငြင်းပယ်ကြသောအခါဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားမူလအစ; ကျား, မသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေး status ကို; မသန်စွမ်းမှု; ဘာသာတရားသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကို; သို့မဟုတ်တခြားအလယ်ပိုင်းဝိသေသ။